Wafdi ka socda Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta oo maanta gaaray qaar ka mid ah Gobollada dalka – Gool FM
(Muqdisho) 13 Maarso 2019. Wafdi ka socoda Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa kormeer ku tagay qeybo ka mid ah Gobollada dalka si ay ugu kuur galaan xalaadda kubada cagta ee ka jira Deeganadaas.
Wafdiga ayaa ka koobnaa labo xubnood oo qeyb ka ah Xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed kuwaas oo kala ah Maxamed Cali Jabane oo ah Kaaliyaha Xoghayaha Xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo Jamaal Xaashi Tuure oo ah xubin guddiga hormarinta kubadda cagta Gobollada ee Xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed kuwaasoo isla maanta ka ambabaxay Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka.
Kaaliyaha Xoghayaha Xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ee Maxamed Cali Jabane ayaa booqday Magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka Jubada hoose si uu ugu kuur galo xaaladda ciyaareed ee magaaladaasi iyadoo lagu wado inuu kulamo la qaato xiriirka kubada cagta ee Jubbaland..
Dhinaca kale Jamaal Xaashi Tuure oo ah xubin guddiga hormarinta kubadda cagta gobollada ee Xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa socdaal ku tagay Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, halkaasoo uu isaguna kulamo kula qaadan doono xiriirka kubadda cagta Maamulka Koonfur Galbeed.
Wafdigan oo maanta ka ambabaxay Magaalada Muqdisho ayaa waxaa sii sagootiyey hadallo dardaaran ahna siiyey kusimaha guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ee Cali Cabdi Maxamed (Cali Shiine) ahna guddoomiye ku xigeenka xiriirka K/cagta Soomaaliyeed.
Xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ayaa sababta uu wafdigan ugu kala diray gobollada dalka waxaa lagu sheegay inuu doonayo inuu halkaasi ku qabto tababaro sare loogu qaadayo tayada ciyaareed ee dhanka kubadda cagta ee halkaasi ka jirta iyo sidii tartammo kubadda cagta ah loogu qaban lahaa Magaalooyinkaas, waxaana suuro-gal ah in tartammada uu qabto xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta qaarkood lagu ciyaaro gobollada dalka.
Arrintan ayaa waxa ay qeyb ka tahay ballan qaadyadii uu sameeyey Madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ee C/qani Siciid Carab markii la doortay 15 bishii November ee sanadkii hore 2018, iyadoo arrintan ay noqonayso middii ugu horreysay ballanqaadyadii uu sameeyey Madaxweynaha Xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed markii la doortay.
Muuqaal soo koobaya xilliyadii ugu fiicnaa uu Ronaldo la qaatay Juventus ka hor wacdarihii xalay